သွေးပုံမှန်စစ်သင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်းက ဘာများလဲ... - Hello Sayarwon
သွေးပုံမှန်စစ်သင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်းက ဘာများလဲ...
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအနှံ့ဆီကို စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေက အသက်ရှင်နေစေဖို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါတွေခံစားရနိုင်ခြေ နဲ့ ဘယ်လိုရောဂါတွေကူးစက်ခံထားရပြီလဲဆိုတာကို အဖြေထုတ်ပေးဖို့ပါအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပြီး ရောဂါကင်းစေဖို့ သွေးစစ်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေနော်။
ရောဂါတော်တော်များများကို သွေးကနေတဆင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ် ကုသဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ် ရောဂါရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိမှဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ ကျန်းမာပြီး ရောဂါကင်းစေဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်သွေးစစ်နေဖို့လိုပါမယ်။ သွေးစစ်တာက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေကို သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေ အများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေက ကိုယ်တိုင်သိထားပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်သွေးစစ်တာကို လုပ်သင့်ပါတယ်။
အချို့ရောဂါပိုးတွေက ကူးစက်ခံရပြီးပြီးချင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်သလို သွေးထဲမှာလည်း ပြမနေတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါ သွေးထဲမှာ ရောဂါပိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိသံသယဖြစ်တဲ့ ရောဂါပေါ်လိုက်ပြီး သွေးစစ်သင့်ပါတယ်။
သွေးစစ်တဲ့အမျိုးအစားက တစ်ခုမကရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင်
သွေးဆဲလ်အရေအတွက်ကို စစ်တာ (CBC)
Blood chemistry tests (သွေးတွင်းက ရောဂါပိုးတွေကို စစ်ဆေးတာပါ)
သွေးအမျိုးအစား ( အရေးပေါ်သွေးလိုအပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်)
အသည်းရောင်အသားဝါ A ပိုး
ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေလားဆိုတာတွေကို သွေးစစ်တာကနေတဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။
သွေးစစ်တာကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေများလဲ……….
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နှလုံး၊ သိုင်းရွိုက်တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ်
ကင်ဆာ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ရောဂါခံစားနေရလားဆိုတာကို သိရှိစေနိုင်မယ်
သောက်တဲ့ဆေးတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရဲ့လားဆိုတာကို သိရှိစေနိုင်မယ်
သွေးယိုစီးနိုင်ခြေ၊ သွေးခဲနိုင်ခြေရှိလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ်
သံဓာတ်အားနည်းတာကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတာကို သိနိုင်မယ်
ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေအားနည်းနေလားဆိုတာကို သိရှိစေနိုင်မယ်
နာတာရှည်ရောဂါတွေ ခံစားနေရလား၊ ခံစားရနိုင်ခြေရှိလားဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ်
ရောဂါတွေကို အစောပိုင်းအဆင့်မှာကတည်းက သိရှိစေနိုင်မယ် စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာနေစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သွေးပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်နော်။
Blood Test https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/blood-test Accessed Date 19 November 2019
Blood tests and diagnosing illness: what can blood tell us about what’s happening in our body? https://theconversation.com/blood-tests-and-diagnosing-illness-what-can-blood-tell-us-about-whats-happening-in-our-body-80327 Accessed Date 19 November 2019